महराले राजीनामा दिए, अब को बन्लान् त नयाँ सभामुख? संविधान भन्छ नेकपाको मिल्दैन – MySansar
संसद सचिवालयकै एक महिलाले गम्भीर आरोप लगाएको २४ घण्टा नबित्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आरोपपछि बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको काम कसरी अघि बढायो भन्ने बारे केही नयाँ कुरा नआए पनि आज मंगलबारै उनले राजीनामा दिएका हुन्। संविधान अनुसार लिखित राजीनामा दिएमा वा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुखको पद रिक्त हुन्छ।
सभामुखले राजीनामा दिएमा कांग्रेसलाई फाइदा हुनसक्छ। किनभने संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुन्न भनेर धारा ९१ (२) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
जतिबेला सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो, त्यतिबेला नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै दल थिए। अब दल एकीकरण भइसकेको छ। त्यही अनुसार एक पद छाड्नु पर्ने भनी प्रतिपक्षले कुरा उठाउँदै गर्दा यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकोले छलफल नगर्न सभामुख महराले संसदमा रोक्दै आएका थिए।
अब यदि सभामुखले राजीनामा गर्ने हो भने संविधानको सोही धारा अनुसार नयाँ सभामुख पुरुष र नेकपा बाहेकको दलको हुनुपर्छ। किनभने संविधानको व्यवस्था यस्तो छ-
यसमा केही कूतर्क चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै उपसभामुख शिबमाया तुम्बाहाङफेले त पार्टीको पदबाट राजीनामा दिइसके। त्यसैले सभामुख नेकपाकै हुन मिल्छ। कूतर्क गरे पनि संविधानको भावना भने त्यस्तो हैन।
अथवा उपसभामुखलाई पनि राजीनामा दिन लगाएर सभामुख भने नेकपाले राखेर उपसभामुख अरु पार्टीलाई दिन सकिन्छ।
यदि सभामुखले राजीनामा दिए भने त्यसपछि के होला त? के यो केस यत्तिकै सकिएला?
4 thoughts on “महराले राजीनामा दिए, अब को बन्लान् त नयाँ सभामुख? संविधान भन्छ नेकपाको मिल्दैन”
समस्या पर्दैन किनभने समाजवादी पार्टी को सभामुख बनाए होला नि?
Pingback: महरा काण्डमा नयाँ ट्विस्ट : हिजो ज ब र्ज स्तीको आ रो प, आज बाउछोरीको नाता पो रे; हिजो पि टे को, आज आएकै छैन रे – Mysansar
महराको कामवासनाले पार्टी डुब्ने भयो । अब संसदमा जबरजस्ती बिधेयक पास गर्न गारो पर्छ होला ।
Pingback: सभामुख महराले दिए राजीनामा, भाषा अनौठो- छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्म – Mysansar